Kubaluleke kakhulu ukuhlela kusengaphambili indawo yangaphakathi yokuhlala. Okokuqala kukhona indawo elula yokuhlala namakamelo ebhizinisi, izindlu zokugeza, izindawo, izindawo zokuphumula. Indlela ejulile yokuhlela ifaka isandla ekwakheni izimo ezihlelekile kulungu ngalinye lomndeni.
Imigomo eyinhloko lapho isikhala sangaphakathi sendlu yangasese kufanele ihlelwe khona kungukuhlakanipha nokuqonda, ukuhlaziywa kwezidingo ngabanye abaqashi, amathemba okuhlelwa kabusha kwendawo yokuhlala.
Isici esibalulekile sokuhlela ukuphathwa kwezihambi zabanikazi bendawo. Kuyinto eyodwa yokuhola ukuphila okulinganiselwe, okuthulile kude nomuzi omkhulu. Kulula kakhulu ukuthatha abangane, abajwayele, abalingani bebhizinisi endaweni yakho.
Ukuze ngokushesha ukuhumusha imibono ibe yiqiniso, ochwepheshe batusa ukwenza umdwebo omncane wokuhlela kwabo esikhathini esizayo ngezandla zabo. Kulesi simo kuyadingeka ukuqaphela amaphuzu abaluleke kunawo wonke okumele asebenze ngokuhlelwa esikhathini esizayo.
Phakathi kwezinye izinto, uma uhlela indawo yangaphakathi yekamelo, kubalulekile ukucabanga ngokucophelela nganoma yikuphi ukuxhuma okuyoba lula ukuhamba ukusuka ekamelweni elilodwa kuya kwelinye. Uhlelo olungenhla lubizwa ngokuthi uhlelo lokuhlela ukusebenza. Indalo yayo ibhekwa njengento edingekayo yokuqala yabaningi bezakhiwo zanamuhla nezakhiwo zangaphakathi kubanikazi besakhiwo.
Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi ubungako obuncane bekamelo lokuphumula kumele okungenani libe yi-18 m 2 . Isayizi enhle salesi gumbi ubukhulu bomyalelo we-30 m 2 . Kuphela kulesi simo kuzoba khona indawo eyanele ekamelweni lokuphumula ukuze kwenziwe ilungiselelo elihle lefenisha, ukuhlelwa kwemikhosi, ukwamukela izivakashi nokuphumula okuvamile embuthanweni womndeni omkhulu.
Izakhiwo zangaphakathi zesakhiwo sokuhlala zihlelwe ngokubheka inombolo, indawo nendawo yamakamelo okulala. Ukuhlelwa kahle kwamakamelo okulala kunomthelela ekusungulweni kwesikhala somuntu ngamunye lapho ungahlala khona umhlalaphansi.
Okufanele kunoma yiliphi igumbi lokulala kungendawo engaba ngu-10 m 2 . Indawo ekhululekile kakhulu, ecabangela ukuba khona kwekamelo elikhulu, umbhede ombhedeni, izingubo zokugqoka, iyigugu lesigcawu esingu-15-16.
Ekuqaleni, kunconywa ukuthi uhlele izindlu zokulala ezihlukene kuwo wonke umuntu, ngisho nelungu elincane kunabo bonke emndenini, ngoba ngokuhamba kwesikhathi isikhathi esengeziwe sokuchitha imali ngokuvuselela lezi zakhiwo kungadingeka.
Uma esikhathini esizayo esikude umndeni uhlela ukugcwalisa, kulokhu, ukuhlela isikhala sangaphakathi salinye lamakamelo okulala uqale ngaphansi kwekhabhinethi noma elinye igumbi lokusebenza. Njengoba usuhlomele ikamelo ne-akhawunti yokuhlela kabusha esikhathini esizayo, ngemuva kokuzalwa kwengane kungashintshwa kalula ibe yindawo yokubeletha.
Kuyinto elula kakhulu ukuthola izindlu zangasese, izindlu zokugeza noma amakamelo okugeza eduze kwekhishi namagumbi okulala. Izakhiwo ezinjalo zichazwa njengendawo yebusuku neyosuku, lapho abaqashi bachitha isikhathi esiningi sosuku. Ngakho-ke ilungiselelo eliseduze lamakamelo okugeza lifaneleka kakhulu.
Uma sikhuluma ngamahholo namakhansela, akunakulungiswa neze ukwenza kube mncane kakhulu. Isikhala sangaphakathi salezo zindlela kufanele kube okungenani amamitha amabili nesigamu ngobubanzi. Umqondo omuhle ukuhlanganisa amakhansela negumbi lokuphumula, lapho igumbi libe yindatshana.
Ukuba khona kwendlu enjalo njengegumbi lokudlala, igumbi le-billiard, igumbi elinemidlalo yaseshashalazini, njll, liba usizo kuphela uma lilungile ngempela. Uma kungenjalo, ngenxa yokuxhashazwa okungajwayelekile, izakhiwo ezinjalo zizokhipha kuphela isikhala esiyigugu ekhaya.
Okunye okungcono ukuhlela izindawo zokudlala nokuzilibazisa ngendlela yegumbi lokuphumula. Ukuze wenze lokhu, kwanele ukwenza ukwakhiwa okusemandleni esakhiwo, usebenzisa izinsizakalo zabaqambi bangaphakathi bezobuchwepheshe.
I-cream for muffins: ukupheka zokupheka
Uyini umbomvana? Ukunakekela izitshalo ekhaya
Amafomu Split wokubhaka: izinhlobo kanye nezici yokusetshenziswa